Twitter Basics: Mashandisiro Aungaita Twitter (yeVatangi) | Martech Zone
Twitter Basics: Mashandisiro Aungaita Twitter (yeVatangi)
Chishanu, December 4, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Zvichiri kukurumidza kudana kufa kweTwitter, kunyange ini pachangu ndinonzwa sezvavanoramba vachigadzira zvigadziriso izvo zvisiri kusimudzira kana kusimbisa chikuva. Chazvino uno, ivo vakabvisa zvinoonekwa zvinoverengeka zvinowanikwa kuburikidza nemagariro mabhatani pane masaiti. Ini handigone kufungidzira kuti sei uye zvinoita sekunge inogona kunge iine kukanganisa kune kwese kubatanidzwa kana iwe ukatarisa traffic yeTwitter pane akakosha masayiti masayiti.
Kunyunyuta kwakaringana… ngatione zvakanaka zvinhu! Hupfumi hwechokwadi-nguva data pa Twitter haina kufananidzwa pamhepo. Ipo Facebook ingave iri yekukurukurirana online, Twitter inoenderera kuve kurova kwemoyo mumaonero angu. Facebook inosimbisa uye inosefa iyo yakawanda yedata, saka kushandiswa uye kubatirana zvakanyanyisa kukanganiswa. Kwete kudaro paTwitter.
Chii Chinoita Kuti Twitterasiyana
Twitter irukova rwe data rwunoramba ruchipfuura narwo. Maakaundi akawandisa aunotevera, nekukurumidza rukova. Asi haina kusefa, haina kunanga, uye inogara ichionekwa. Uye kusiyana nemamwe mapuratifomu eruzhinji, maakaundi aunoshuvira kutaura nawo anotaurika nawo. Ingokanda iyo @douglaskarr uye iwe unogona kundibata uye unyore kwandiri zvakananga. Ndekupi kumwe kunogoneka online? Uye kana iwe uchida kutsvagisa, ingo tsvaga iro izwi uchishandisa hashtag, senge #marketing.
Tanga ne Twitter
Nyorera - uye edza kutsvaga huru yekubata yeTwitter pasina zvimisikidzo uye musanganiswa wakaomarara. Haasi ese makuru anobata anotorwa; tinogara tichishamisika kuti isu tichiri kukwanisa kuwana chaiyo inobata kune vedu vatengi. Ini ndaikurudzira zvikuru kuve nezvako pachako account uye yekambani account pane pane kuwedzeredza iwo maviri. Nebhangi, kukwidziridzwa kuri kutarisirwa zvakanyanya pane maakaunzi ako ega kwaunogona kungotsamwisa vanhu vari kuyedza kukutevera.
Gadzira Profile Yako - hapana anovimba kana kutevera chiratidzo chezai, saka ive shuwa yekuwedzera pikicha yako kuaccount yako uye logo yekambani yako. Tora nguva yekugadzirisa yako color scheme uye uwane yakanaka yekumashure mufananidzo iyo inobata kufarira kwevanhu.
Chengeta Bio yako pfupi uye inotapira! Kuedza kuisa ma URL, ma hashtag, mamwe maakaunzi uye akapfupikiswa tsananguro hakumanikidze. Heano mazano angu - chii chako hunyanzvi uye chii chinoita kuti uve wakasarudzika? Vaise mune yako bio uye vanhu vanowana uye nekutevera iwe kuburikidza nekutsvaga.
Dhawunirodha maTwitter Apps
Kunyangwe iwe uri pakombuta, smartphone kana piritsi, pane chizvarwa Twitter kunyorera ndakakumirira! Kana iwe uchida kuenda kunze kwese, iwe unogona kurodha pasi uye kutanga ne TweetDeck - yakazara-upamhi chikuva neese mabhero uye muridzo.
Tweets - Twitter yataura nezve kuwedzera hunhu kuverenga kwema tweets kupfuura mavara zana nemakumi mana. Ini chokwadi ndinovimba kwete, hwakawanda hunyanzvi uye kukwezva kweTwitter ndiko kukurumidza kudyiwa kweyakagadzirirwa zvakanaka tweet. Zvakafanana nekunyora haiku; zvinotora kuita uye kufunga. Zviite zvakanaka, uye vanhu vanozogovana nekutevera.
Shandisa maHashtag - wedzera kuita kwako nekusarudza imwechete hashtag, maviri ari nani. Kana iwe uchida kuita zvimwe kutsvagisa hashtag, isu takanyora toni yemapuratifomu (RiteTag inotonhorera chaizvo!). Uchishandisa ma hashtag anoshanda anowana iwe kuti uwane sevashandisi veTwitter vari kutsvagisa chikuva.
Kukura Yako Twitter Reach
Tsvaga vatungamiriri veindasitiri yako paTwitter, vatevere, vagovana zvavo zvemukati, uye batana navo kana iwe uchigona kuwedzera kukosha kuhurukuro.
Tsvaga vatengi vako paTwitter, vatevere, vabatsire, ita navo, uye dzokorora zvinyorwa zvavo kuti ugadzire hukama huri nani hwekushanda.
Usave chirwere. Dzivisa otomatiki meseji mapuratifomu, kunyorera vanhu zvisina basa, uye kushandisa kura muteveri wako zvirongwa. Ivo vari kutsamwisa, uye ivo vanogadzira zvine mwero kukwidziridza manhamba ako pasina kunyatsokuratidza iwe kuti uri kuita sei mushe
Kwiridzira Paunopa Ukoshi
Une chiitiko chirikuuya? Rongedza maTweets anoverengera kuenda kuchiitiko nemazano ekuti vateveri vako vachabatsirwa sei nekupinda.
Ipa zvidzoreso kana uchikwanisa, Twitter inoda yakakura coupon kodhi kana dhisikaundi.
Usangosimudzira, ipa kukosha. Kuteerera kune vateveri 'nyaya uye kupa mamwe matipi pachena zvichabhadhara muzvikamu.
Rangarira kuti maTweets anobhururuka ne… kana iwe uine chimwe chinhu chikuru chekugovana, chigovana kashoma pamusoro.
Sanganisa WordPress ne Twitter
Uye kana uchida kushambadzira zvirimo kuTwitter, iyo Jetpack Plugin kushambadza chimiro chinozviita zvakakwana!
Rangarira, Twitter ndeye marathon, kwete sprint. Kukura kwako kunotevera kurongeka uye nekufamba kwenguva iwe uchaona iwo mabhenefiti. Zvakawanda sekuwedzera kufarira, hausi kuzoenda pamudyandigere mushure mekutanga kwako ma tweets. Iyi infographic kubva Salesforce inopa imwezve nzwisiso… handina chokwadi chekuti uchave pro (kana paine chinhu chakadai), asi iri izano rakanaka.
Tags: kura vateveri vakohashtagsmashandisiro aungaita twitterretweetTweetTweetdeckTwittertwitter maapptwitter zvekutangatwitter infographictwitter inosvika
Vafambisi Vangaita Sei Kuti Vakwidziridze paInternational Ecommerce Mukana muKisimusi ino?
Kufamba kweMail: Wedzera Autoresponders uye Ongorora Equence Sequences
Dec 15, 2015 pa 5: 13 AM